अहिले पनि यौन पुस्तक पढ्छु : कुमार नगरकोटी
classickhabar २०७४ जेठ २८ आइतबार प्रकाशित
अंग्रेजी भाषाका पोर्नोग्राफिक उपन्यासहरू, पोर्नोग्राफिक म्यागजिनहरू पनि पढ्छु । त्यस्ता उपन्यासको नामचाहिँ याद हुँदो रहेनछ । ती पढ्दा सेक्सतिर मात्र दिमाग जान्छ । आजभोलि आनन्दका लागि भन्दा पनि सेक्सलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने प्राविधिक कुरा थाहा पाउन पढ्छु ।
पहिला एकदमै ¥यान्डम्ली पढ्थेँ । पढ्ने गाइडलाइन थिएन । अहिले कुन पुस्तक पढ्ने भन्ने जानकारी हुन्छ । नयाँ लेखकले कस्तो लेखिरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड के छ ? भन्ने कुरा खोजी गर्छु । एउटा पुस्तक पढेपछि त्यसको रिफरेन्समा रहेका पुस्तक पनि खोजिन्छ ।
कुमार नगरकोटी आख्यानकार
अहिले मैले नेपाली पुस्तक पढिरहेको छैन । नेपाली पुस्तकले मलाई छुँदैन । पछिल्लो समय बुद्धिसागरको फिरफिरे पढेको हुँ । मलाई कर्णाली ब्लुजभन्दा फिरफिरे राम्रो लागेको हो । यो मन परेको उपन्यास पनि हो । अरू त पढेको छैन । भर्खरै गणेश पौडेलको पैताला उपन्यास पढेँ । यसको पाण्डुलिपि पनि पढेको थिएँ । यो तान्त्रिक उपन्यास हो । योचाहिँ मलाई पढ्न रमाइलो लाग्यो । नयाँ स्वाद छ । मैले अहिलेसम्म पाण्डुलिपि पढेको थिइनँ । यो नै पहिलो र अन्तिम पाण्डुलिपि हो । अब पढ्दिनँ । समीक्षकहरूले ‘पैतालामा नगरकोटीको स्वाद आयो, नयाँ कुरा भएन’ भने ।
तपाईंलाई चाहिँ आफ्नो स्वाद आएजस्तो लागेन ?
मलाई पनि त्यस्तो लागेको हो । मैले गणेशलाई पनि भनेको थिएँ । ‘तपाईंलाई समीक्षकले नगरकोटी फ्लेभर आयो भन्नेछन्’ भनेको थिएँ । त्यो छ पनि । तर, उनले जसरी लेखे मलाई राम्रो लाग्यो । त्यो अलि बेग्लै छ । प्रायः नेपाली आख्यानमा कथा भन्ने शैली एकै तरिकाको छ । पैताला फरक शैलीमा आएकाले पनि मैले मन पराएँ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।